Madaxa Wadamada G-20 -ka oo maanta kulan yeelanayaan . – iftiin fm
Madaxa Wadamada G-20 -ka oo maanta kulan yeelanayaan .
Madaxda 20-ka waddan ee ugu dhaqaalaha badan adduunka ayaa mar kale waxay ballan-qaadayan si loo hubiyo in si caddaalad ah loogu qaybiyo tallaallada COVID-19, dawooyinka iyo tijaabooyinka adduunka oo dhan, sida ku xusan war-murtiyeed qabyo ah oo ay soo saareen,
Madaxda 20-ka waddan ee ugu dhaqaalaha badan adduunka ayaa sida oo kale waxay sheegeen in ay garab siinayaan waddamada saboolka ah ee la daalaa dhacaya ka-soo-kabashada cudurka faafa ee coronavirus.
← Madaxa xibsiga Ford Kenya Moses Wetangula oo baaq uu diray Madaxweyne Uhuru kenyatta.
Jurgen Klopp oo soo saaray Liiska xiddigaha uu kaga hor tagi doono Leicester City . →